Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Tijaabada Caafimaadka Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka > Qalabka Imtixaanka Caafimaadka
Qalabka Tijaabada Caafimaadku waa kuwa la socda heerka garaaca wadnaha, garaaca garaaca ama xogta jimicsiga kale, oo xitaa isticmaali kara qalabkan elegtarooniga ah si ay u ururiyaan tilmaamayaasha jirka, garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga iyo xogta kale.
Qalabka Tijaabada Caafimaadka, horumarinta aaladaha la qaadi karo ayaa si xawli ah ku socday sannadihii u dambeeyay, wax soo saar badan oo badan ayaa si tartiib tartiib ah u galay nolosha bulshada. Sida laga soo xigtay sahanka, horaantii 2015, xajmiga suuqa ee qalabka caafimaadka ee la qaadi karo ee Shiinaha ayaa gaadhay 1.19 bilyan yuan.
Qalabka Tijaabada Caafimaadku waa inuu noqdaa mid xanbaarsan ka-hortagga cudurrada, qaab nololeedka, sida caafimaadka ciyaaraha, la socodka deegaanka, iwm.) hagitaan tiro, la socodka caafimaadka iyo kalkaalisada kordhinta iyo is-kaabsiinta midba midka kale, gudaha iyo dibadda isbitaalka iyo dhammaan noocyada wax-garadka. Helitaanka isku xirka qalabka iyo Buundooyinka, laakiin hadda, daawaynta la qaadi karo ayaa weli ah kormeerka dhaqdhaqaaqa aasaasiga ah iyo sidoo kale qadar yar oo ah helitaanka xogta caafimaadka iyo habaynta marxaladda aasaasiga ah.
Qalabka Tijaabada Caafimaadku waa sida ay qalabkani u saxsan yihiin. Dhakhaatiir badan ayaa sidoo kale su'aal ka keena xogta ku saabsan qalabka caafimaadka e-macmiilka. Aalado badan oo macaamiil ah ayaa ah kaliya xog sax ah oo la isku halayn karo, laakiin aan la kulmin shuruudaha ogaanshaha caafimaad ama calamadaha caawiyayaasha. Waxaa laga yaabaa inaad heli karto xogtaada caafimaadka, laakiin takhtarka xaadirayaa ma aamini doonaa oo ma isticmaali doonaa si aan shaki lahayn?
Qalabka Tijaabada Caafimaadka wuxuu leeyahay arrimo badan oo saameeya saxnaanta cabbirka. Marka lagu daro saxnaanta jajabka loo isticmaalo qalabka, algorithm ee xogta xogta, qaab dhismeedka sheyga, xakamaynta khaladaadka habka wax soo saarka, habka isticmaalka isticmaalaha iyo deegaanka ayaa si dhab ah u saameyn doona saxnaanta cabbirka ugu dambeeya. .
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Imtixaanka Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Imtixaanka Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Imtixaanka Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.